Uganda: Lama baxayno Ciidankeena
15 Nov 15, 2012 - 6:36:55 AM
Dowlada Uganda oo ay ciidamo fara badan ka joogaan Somalia ayaa sheegtay inay ka laabatay go'aan ay horay u gaartay oo ahaa inay ciidamadeeda Nabad ilaalinta ah ka saarayso dalal ay ku jirto Somalia.
Xukuumada Uganda ayaa caro ay ka qaaday Warbixin ay diyaariyeen xubno ka UN-ka tirsan oo ku eedeynaysay Uganda iyo Rwanda inay taageero milateri siiyaan jabhada M23 ee ka dagaalanta dalka ay dariska yihiin ee DR Congo.
"Waan ka laabanay go'aankii aan ciidamada uga saaraynay Somalia iyo dalal kale oo Gobolka ku yaala, arintaasna xal ayaa laga gaaray" ayuu Ra'iisul Wasaaraha Uganda Amama Mbabazi, wuxuuna xusay in dalkiisa uu weli ka careysan yahay eedeyntii ay u soo jeediyeen Gudiga Qaramada Midoobay ka socday.
Uganda ayaa waxay hogaanka u haysaa howgalka Midowga Afrika ee Somalia ka socda, kaasoo lagu magacaabo AMISOM, waxaana kaga sugan Somalia in ka badan 6,000 oo askari oo isugu jira Milateri iyo Booliis.
"Howgalka ay ciidamadeenu u joogaan Somalia, Centeral Africa iyo DR Congo wuu sii soconayaa, lamana baxayno ciidamadeena, waayo arintaas xal hoose ayaa laga gaaray" ayuu Ra'iisul wasaaruhu ku sheegay hadalkiisa.
Ra'iisul waasaraha Uganda ma sheegin sida xalka looga gaaray go'aankooda iyo inay Qaramada Midoobay ka laabatay warbixintii ay soo saartay, waxaase arinta yaabka leh ay noqotay markii uu sheegay in sababtii ay ciidamadooda ula bixi lahaayeen ay tahay sidii ay isaga difaaci lahaayeen weeraro ay kusoo qaado koox argagaxiso ah oo uu sheegay in UN-ku uu taageero.
Hadalkan ayaa wuxuu dhaliyay caro weyn, iyadoo Ma'suuliyiin ka tirsan Uganda ay ku sheegeen inuu yahay meel ka dhac weyn, waxaase arin weyn lagu tilmaamay in Uganda ay ka laabatay go'aankii ay ciidamadeeda kula bixi lahayd.